भिजिट नेपाल २०२० विशेषः पर्यटकले भनुन्– ‘वाउ नेपाल, ह्वाट अ कन्ट्री !’ « News24 : Premium News Channel
पर्यटकले डे वानमा सामना गर्ने यो समस्या सानो समस्या भने होइन । त्यसबाहेक २०२० मा नेपाल आउनेहरुका लागि भिषा शुल्कमा कति छुट ? देशै भरका होटलहरुमा कति छुट ? त्यो जानकारी दिएर विश्वमा प्रचार गर्नुपर्छ । विभिन्न देशमा पर्यटन दुत बनेकाहरुको हालसम्मको खास काम भनेको दशै तिहार, तीज, नयाँ बर्षमा आसन ग्रहण गर्ने र भाषण गर्ने मात्र देखिएको छ ।